Madaxweyne Farmaajo oo booqashadii u horeysay ku tagaya mid ka mid ah dalalka deriska!! | kowtharmedia.com
Home WACYIGELIN Madaxweyne Farmaajo oo booqashadii u horeysay ku tagaya mid ka mid ah dalalka deriska!!
Madaxweyne Farmaajo oo booqashadii u horeysay ku tagaya mid ka mid ah dalalka deriska!!
Mar 05, 2017WACYIGELIN, WARAR
Sida ay sheegayaan warar ay heleyso Warbaahinta Madaxweynaha ayaa uga qeyb galaya Nairobi shir gaar ah oo Madaxda Urur Goboleedka IGAD uga arrinsanayaan xaalada qaxootiga Soomaaliya.
Itoobiya markay ka soo qayb galaayeen shirka Caeemasaarka Madaxweyne Farmaajo waxaa shirkaas uyimaaday Ra/wasaaraha Itoobiya, waxaana la ogoyn shirka kale hadii Itoobiya ee uyeerato Farmaajo inuu aadi doonyo iyo inuu udiri doonyo R/ Kheyre oo ku darajo ah R/ Tigreyga ee gumaysta Itoobiyada Qooomiyadaha Badan ku nool.
Previous PostDaawo Sawirro: Dadka miyiga Somalia ugu dhimanaya abaaraha iyo cudurada ka dhashay oo sii kordhaya! Next PostDAAWO MUUQAAL> Qoriga iyo qalinka keeba qaalisan, yuusa yahay wiilka qoriga sida??